रूसी मुद्रा | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
सवारी साधन मुद्रा कनवर्टर
क्यानाडा मुद्रा विनिमय
Home रूसी मुद्रा RSS
यो रूबल रूसी पैसा मुद्रा
यो रूबल रूसी पैसा मुद्रा. यो पनि जो आंशिक मान्यता प्राप्त दुई महासंघों दक्षिण Ossetia र अब्खाजिया को मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिन्छ. यो रूबल पूर्व सोभियत संघ र रूसी साम्राज्यको मुद्राको रूपमा प्रयोग भएको थियो तिनीहरूले अन्ततः अप भङ्ग अघि. बेलारुस को देश पनि एउटै नाम को मुद्रा छ. 100 Kopeks बनाउन 1 रुबल. रूसी मुद्रा आधिकारिक प्रयोग गरिन्छ कि कुनै पनि प्रतीक छैन, हुनत “py6” व्यापक प्रयोग गरिन्छ कि एक संक्षिप्त छ. विभिन्न प्रतीक आधिकारिक प्रतीक निर्णय गर्न अब को रूपमा छलफल भइरहेको छ.
शब्द “रुबल” शब्द बाट लिइएको हो “rubit” त्यस्को मतलब “काट्नु”. पहिले समयमा, रुबल छैन वास्तवमा minted मुद्रा थियो; बरु यो मूल्य र वजन को एक उपाय थियो. Kopeks भन्दा अन्य, को रुबल पनि altyn मा subdivided गर्न सकिन्छ (3 kopecks), को grivennik (10 kopecks), को polupoltina (25 kopecks), र poltina (50 kopecks). यो वर्ष थियो 1704 रूसी सरकार रूसी मुद्राको रूपमा चाँदी rubles issuing सुरू. 1 रुबल सुरुमा मा मूल्यवान थियो 28 चाँदी जीएम तर 1760 का यसको लागि devalued 18 चाँदी जीएम. यस वर्ष बीच 1756 र 1779, सुन सिक्का जारी र थिए वर्ष बीच 1770 र 1771, तामा सिक्का जारी थियो. Assignatsii, कागज promissory नोट years1769 र बीच जारी थियो जो थिए 1849.
रूसी मुद्रा अन्य मुद्राहरू एक नम्बरमा मूल्य नातेदार मा एक ठूलो गिरावट भइरहेको छ. वास्तबमा, अगस्ट र प्रारम्भिक सेप्टेम्बर अन्त्यतिर 2014, यो रेकर्ड lows छोयो.
रूस साथै आर्थिक अवसाद देखि पीडित छन्. तर, मानिसहरू एक devalued रूसी मुद्रा सम्बन्धित समस्याहरू उत्सुक हुनेछौं सचेत छन्. यो रुबल गरेको मूल्य डलर र यूरो को भनेर विरुद्ध पनि कम गिर गर्न अनुमति गरिएको छ. रूसी अर्थव्यवस्था तेल भारी गाँसिएको छ किनभने यो अनुमति दिइएको थियो, र तेल देखि मा व्यापार छ $49 तिनीहरूले चोट छन् बैरल. म कतै पढ्न रूस बारेमा हुन तेल आवश्यक छ कि $70.00 प्रति तिनीहरूको बजेट सन्तुलनमा लागि क्रममा बैरल